Good Self Kuwiriranisa sikuta With APP - Jomo Technology Co., Ltd
Kune unlicensed hoverboards mazhinji imomo pa pamisika, uye uchida kuita kuti chokwadi uchava mumwe iyo yakachengeteka kuchovha iwe kana yenyu mbudzana. Hoverboards izvi zvinowanikwa kubva yakatosiyana yemakambani dzakasiyana kukura uye chimiro kuti kusangana munhu chinodiwa. Vakurukuri mukati hoverboard segway vari encased ari kabhoni fible rakafukidza panze. Wana wako zvaida hoverboard anozvipira vakadengezera emagetsi Scooters pamusuo yako nokurayira kubva sarudzo dzedu huru, Koowheel E1 mukuru kupfuura zvetsika yemagetsi sikuta.
Chekutanga, zvakanga Patent Innovative mufashoni inotonhorera rakagadzirwa Koowheel.
Chechipiri, rine Free APP kunyora uye kugoverana yenyu rwendo ose, kushandura mezviruva.
Chechitatu, akatungamirira vanoratidza chidzitiro zvachose anoratidza bhatiri uye nokukurumidza. Zvose izvi zvinhu zvakanaka kuti vana uye vakuru. chigadzirwa Izvi zvichida hoverboards mukurusa kuti zvandakaita kuwana uye anouya pakuparadzwa zvinhu zvinoita yakakodzera chinangwa chayo. Zvadaro, taona vakaongorora ari hoverboards kupa inonyatsobudirira sarudzo.
Most Mini Segway hoverboards vane aimhanya-siyana uye uremu. Achitaura pamusoro kumhanya uye zvakasiyana pamusoro hoverboard, uyu munhu anopa Max kumhanya 22km / h. Zvingaita zvimwe Takudzai 80-100kg uremu pairi. Private zvifambiso zvino anova mamwe zvinonakidza uye ichiita mabasa akawanda pakatanga vaizviti BALANCInG Scooters/ hoverboards . Utsanzi ndiyo shamwari mukuru nevanhu chiri kuvandudza mararamiro uye kupa zvakawanda zvokusarudza kuona kupiswa itsva chinoitwa nyika danho rimwe nerimwe.
On ichi Self vakadengezera Scooters zvayakaita yepaIndaneti, Tine aongorora vapemhi izvi izvo kuti kuva akavimbika uye kupa zvakanaka unhu mapuranga. Dzakachengetedzwa akaumba panguva vari kuuya zvakare pa pamusika. Dzinofamba kuruboshwe kana zvakakodzera kuti kutendeuka, kana idzokere shure achinje. Scooters vakanga kutengeswa zvikuru munhu ehupfumi kuti images vana. Zvisinei, kubva kwangu pachangu kufunga, dzimwe nzira Zvingabatsira munhu nokushaiwa asi kwete vose. Chero kuvatumwa kuti, uye anotenga ngwarirai - unogona vachichengeta kutenga ndimu. NEW Update: NGWARIRA kutenga cheaply akaita Koowheel knockoffs! Nepo vamwe Scooters vanoedza nechokwadi kuchengeteka kwako nokupa iwe ane mapatya BALANCInG gadziriro, ungada kuva nechokwadi kuchengeteka kwako kunyange mberi. Kana uchifunga kuti zvebhizimisi haana kuti vibe ano, unogona kushandura kuti nyore vatenge vakaroorana kuzvida BALANCInG Scooters. Unogona kunyange ishe makona ari chaizvoizvo kunyanyisa kumhanya ari chiitiko iwe vadzidziswe nyore chimwe kune divi.
Post nguva: Nov-30-2017